FileZ ဖြင့် Social apps ထဲရှိဖိုင်များကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းမည်နည်း? - Zapya Blog
FileZ ဖြင့် Social apps ထဲရှိဖိုင်များကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းမည်နည်း?
By dewmobile / 2019-03-11
Zapya ရဲ့ product အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော ဖုန်းထဲရှိဖိုင်များ၊ Social apps ထဲရှိဖိုင်များကိုထိန်းသိမ်းပေးသော FileZ သည် တစ်ဖြည်းဖြည်လူသိများလာပါပြီ။ FileZ သည် မိမိဖုန်းထဲရှိ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ document များတွေ လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းပေးနေပါသည်။ Facebook, Whatsapp, Twitter, Messenger ကဲသို့သော Social Apps များအသုံးပြုပါက မိမိသူငယ်ချင်းများပေးပို့သော ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများကိုလည်း အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ပြီး ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ မိမိမလိုအပ်သော ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဖိုင်များကိုလည်း Delete လုပ်၍ရပါသည်။ မလိုအပ်တဲ့အရာများကိုဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဖုန်း Memory များများကျန်စေပြီး စက်လေးခြင်းဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
မိမိဖုန်းရဲ့ Memory ကျန်ရှိမှုနည်းနေသောအခါမှဆိုလျှင် FileZ ကိုအသုံးပြုပြီး မလိုအပ်သောအရများကို delete လုပ်၍ရပါသည်။ ဖြင့်မိမိဖုန်းထဲရှိဖိုင်များကို လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ Recent files ထဲကိုဝင်ပြီး ခုတလောအသုံးပြုတဲ့ဖိုင်များကို ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အလွန်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
FileZ သည်ဖိုင်များကို ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်နိုင်သည့်အပြင် သူတပါးထံလည်း ဖိုင်များကို မျှဝေပေးပို့၍ရပါသည်။ အဓိကဖိုင်မျှဝေပေးပို့သောနည်းလမ်းကတော့ QR code ကို စကမ်ဖတ်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိမျှဝေပေးပို့လိုရာဖိုင်ကို ရွေးချယ်ပြီး QR code တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါ။ သူတပါးထို QR code ကိုစကမ်ဖတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် မျှဝေထားသောဖိုင်များကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Bluetooth ဖြင့် လည်းကောင်း၊ Social media သို့တိုက်ရိုက်ပို့သောလည်းကောင်း၊ WLAN ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Wireless hotspot ဖြင့်လည်းကောင်း ဖိုင်များကိုပေးပို့လို့ရပါသည်။
وم المرأة العالم
چگونه با فایل‌زی برنامه های اجتماعی را مدیریت کنیم ؟